Khaliif Ereg oo loo magacaabay wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Khaliif Ereg oo loo magacaabay wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya
9th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Kadib markii xalay markii labaad Alshabaab weerar ku qaadeen madaxtiiyada Soomaaliya ayaa R/wasaare C/weli Sheekh magacaabay wasiirka Amniga Qaranka, kursigaas oo banaanaa tan iyo markii uu xilkaas iska casila C/kariim Xuseen Guuleed.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Musftaf Sheekh Cali Dhuxulow oo shir jaraa’id warbaahinta ugu qabtay wasaradda warfaafinta ayaa sheegay in wasiirka amniga qaranka loo magacaabay, S/guuto Khaliif Axmed Ereg.
Khaliif Axmed Ereg ayaa horay u ahaa xilligii dowladdii Shariif Sheekh Axmed Taliyaha hay’adda Nabadsugidda ee gobolka Banaadir, waxaase xilkas ka qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ereg waxey siku beel yihiin wasiirkii hore ee Amniga Qaranka C/kariim Xuseen Guuleed, kaasoo xilka iska casilay dhgamaadkii bishii May 2014 markii la weeraray baarlamaanka Soomaaliya oo shir caadi ah ku jiray.
Dhuxulow: Afar ayay ahaayeen ragii weeraray madaxtooyada
Taliyaashii booliska & nabad sugidda oo xilka ku waayey weerarkii Villa Somalia